Huawei P40 Pro နှင့် ရက် ၂၀ ခရီး (Full Review) • TECH CORNER
ဖုန်းကင်မရာတွေက အခုချိန်မှာ ဘယ်လောက်အထိ ခရီးရောက်‌လာပြီလဲဆိုတာကို Huawei ရဲ့ P40 Pro က မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သလိုပါပဲ။ Tech နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဆိုရင် DXO မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကင်မရာဖုန်းနေရာကိုသိမ်းပိုက်ထားတာလဲ P40 Pro ဖြစ်နေတာကို သိကြပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ အခု Review မှာ P40 Pro က ကင်မရာ အရမ်းကောင်းနေသလောက် အခြားနေရာတွေမှာရော ပြိုင်ဘက် Flagship တွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မလားဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး သွားပါမယ်။ ကျွန်‌တော့် review တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အစပိုင်းမှာ သဘောကျတဲ့အချက်တွေ၊ အလယ်မှာ အားမရမိတဲ့ အချက်တွေနဲ့ အဆုံးမှာတော့ Final Thoughts ဆိုတဲ့ ပုံစံလေးအတိုင်းပဲ ရေးထားပါတယ်။ So, let’s find out…
ကင်မရာ ဆရာကြီးဆိုတော့လဲ camera က နံပါတ် ၁ သဘောအကျဆုံးနေရာကို ရောက်လာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သာမန်စာဖတ်သူတွေနဲ့ သိပ်ပြီးမရင်းနှီးတဲ့ Photography terms တွေ သုံးပြီးရေးမဲ့အစား sensor တစ်ခုချင်းစီရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရှင်းပြထားတဲ့ပုံစံမျိုး ရေးပါရစေ။
လက်ရှိ Smartphones ကင်မရာတွေအားလုံးထဲမှာ sensor size အကြီးဆုံး 50MP f/1.9, 23mm Main sensor ကို သုံးထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အခြားသော 108 MP sensor တွေထက်ဘာလို့ ပိုကောင်းနေတာလဲဆိုရင် Photography မှာ sensor အရွယ်အစားက MP ပမာဏထက် ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သိထားစေချင်ပါတယ်။ Sensor size ကြီးလေလေ အလင်းကို ပိုပြီး ဖမ်းနိုင်လေလေပါ။ အလင်းဆိုတာကလဲ ဓာတ်ပုံပညာရဲ့ အသက်ပဲဆိုတော့…
Night Mode on/Night Mode off
Daylight ဓာတ်ပုံတွေတင်မိုက်လွန်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ညဘက် တစ်နည်း အလင်းအားနည်းတဲ့အချိန်တွေမှာ P40 Pro ရဲ့ Nightmode က ညဘက်ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်ထင်ရလောက်အောင် ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်က ညဘက်ပုံတွေကို သာမန်ထက်ပိုလင်းနေတာမျိုးကို သိပ်သဘောကျလေ့မရှိတော့ Night mode မဟုတ်ပဲ Auto နဲ့ ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါ လက်တွေ့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ညဘက်ဓာတ်ပုံတွေ ထုတ်ပေးနိုင်တာ တကယ့်အားရစရာပါ။
Main sensor က ကောင်းလွန်းနေတာ sensor size အပြင် နောက်တစ်ချက်က အခြားဖုန်းတွေလို RGB (Red, Green, Blue) sensor မဟုတ်ပဲ RYYB (Red, Yellow, Yellow, Blue ) sensor ကြောင့်လဲပါပါတယ်။ ဒီကောင်ရဲ့ အားသာချက်က သာမန် RGB Sensor တွေထက် အလင်းကိုပိုပြီး ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ Mian sensor နဲ့တင် နေ့၊ ည ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးသော ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်နေတာဆိုတော့လဲ DXO ရဲ့ Top 1 ဖြစ်နေတာ မထူးဆန်းလှ…
အဓိက သတိထားမိတာက အခြား Flagship တွေလောက် မြင်ကွယ်းကျယ်မသွားတာရယ်၊ Distortion ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံထောင့်က အလင်းယိုင်တာတွေရယ် မတွေ့ရတာပါ။ ဒီနှစ်ခုအကြောင်းရှင်းပါမယ်။ Ultra-wide မှာ Details တွေအများကြီး ကျန်ချင်တာကြောင့် Huawei က MP ပမာဏကို 40MP အထိ တိုးလိုက်တဲ့အတွက် 40MP sensor ရဲ့ size ကြောင့် Ultra-Wide sensor ရဲ့ focal length က 18mm အထိပဲ Wide ပါတော့တယ်။ အခြားပြိုင်ဘက်တွေက 12mm, 13mm အထိ ရှိတာကြောင့် P40 Pro က ပြိုင်ဘက်တွေလောက် မြင်ကွင်းမကျယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Focal Length နံပါတ် သေးလေလေ၊ မြင်ကွင်းကျယ်လေ/wide လေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုးကတော့ Ultra-Wide ဓာတ်ပုံတွေဟာ Main sensor နီးပါး Details တွေ ကြမ်းသလို Lowlight မှာလဲ ရှယ်ကောင်းသွားပါတယ်။
အခြားဖုန်းတွေမှာ Ultra-Wide နဲ့ ရိုက်ရင် color temperature တွေအရမ်းကွာ၊ Details တွေ ကျသွားတာမျိုး P40 Pro မှာ သိပ်မတွေ့ရတော့သလို ဓာတ်ပုံထောင့်က အလင်းယိုင်တာတွေလဲ မရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးကတော့ မြင်ကွင်းအရမ်းကျယ်ကျယ်မရတော့တာပေါ့။ So Next sensor…
Main sensor 1x/ 5x Optical Zoom
12MP Periscope lens နဲ့5ဆ Quality မကျတဲ့ Optical Zoom 5x, ၁၀ ဆ Hybrid Zoom ကနေပြီး အဆ ၅၀ အထိ Digital zoom ဆွဲလို့ရပါမယ်။ ကိုယ်‌တွေ 5x zoom ကို ဘယ်လောက်ထိသဘောကျမိလဲဆိုရင် ဓာတ်ပုံရိုက်တိုင်း 5x သုံးမိသလိုကိုဖြစ်နေတော့တာ… အဆ ၅၀ zoom ဆွဲနိုင်ခြင်းရဲ့ ကောင်းမွေက 10x Hybrid Zoom မှာလာပြီး စံစားရပါတယ်။ 50x က Details တွေညံ့ပြီး လက်တွေ့ဘဝမှာ အသုံးမဝင်ဘူးဆိုပေမဲ့ 50x ကြောင့် ဆွဲလို့ရလာတဲ့ 10x Hybrid zoom က ဓာတ်ပုံတွေကို zoom ဆွဲရိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် တကယ့်ရတနာတွင်းကြီးပါပဲ။
10x Hybrid Zoom/50x Digital Zoom
Main sensor ရဲ့ pixel size ကြောင့် ၂ ပေ အကွာလောက်ကနေတောင် Physical Bokeh (ရှေ့ကြည်နောက်ဝါး) ပုံတွေရနေချိန်မှာ 3D TOF sensor နဲ့ အားဖြည့်ထားတဲ့ Portrait ပုံတွေက သဘာဝအရမ်းကျလွန်းပါတယ်။ ဆံပင်အဖျားလေးတွေကအစ Detection ကောင်းလွန်းနေတာပါ။ Telephoto sensor နဲ့ ရိုက်တဲ့ Portrait ပုံတွေကလဲ Main Sensor လိုပဲ ကောင်းပါတယ်။ သတိထားကြည့်ရင်တော့ Details အားနည်းသလို skin tone တွေက warm ဖြစ်တဲ့ဘက်ကို သွားပါတယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ Main Sensor ရဲ့ Portrait ပုံတွေကို ပိုသဘောကျမိ…ဆိုတော့ ဒီမှာရပ်ပါမယ်။
P40 Pro ရဲ့ cameras တွေကို ပြန်ခြုံကြည့်ရရင် Auto Focus အရမ်းကောင်းလွန်းတယ်၊ လူတွေတင်မဟုတ် အရာဝတ္ထုတွေကိုပါ focus ကောင်းကောင်းကြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေကြားမှာ Lowlight သူမတူအောင် ကောင်းလွန်းတယ်။ Portrait ပုံတွေသဘာဝ ကျလွန်းတယ်။ ဒါဆို ဘာအားနည်းချက်ရှိမလဲ? ကျွန်တော့် Personal အရ သဘောမကျတာတစ်ခုက EMUI camera UI က ရှင်းတယ်၊ ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ Auto ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ပြီးတိုင်း “Sharpening, steady your device” ဆိုပြီး စာလေးပေါ်ပေါ်လာတာပါ။ ၁၀ ပုံမှာ ၈ ပုံလောက်က သူ Sharpening လုပ်ပေးလိုက်လို့ ‌ပိုကောင်းသွားပေမဲ့ ကျန် ၂ ပုံကတော့ အလွဲကြီးလွဲနေတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
ရိုက်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်မြင်နေရတဲ့ view finder ထဲက အတိုင်းထွက်မလာပဲ background or foreground ကို exposure တွေ ဆွဲတင်ပေးလိုက်တာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီ Option ကလဲ Huawei ဖုန်းတွေရဲ့ ‘သညာ’ တစ်ခုဆိုတော့ ပိတ်လို့ကမရ… အောက်က နမူနာပုံလေးဆိုရင် auto mode နဲ့ view finder ထဲမှာ အနောက်ကကောင်းကင်က ပိုမှောင်နေပြီး ကလစ်ပုံလေးကို point of view တစ်မျိုးနဲ့ ရိုက်ထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ Sharpening လုပ်ပစ်လိုက်တာကြောင့် နောက်ခံက ပိုလင်းသွားပြီး ပုံက မလှတော့သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆိုတော့ တချို့ခပ်ဆန်းဆန်း ပုံတွေရိုက်ချင်ရင် Manual Mode ကို အားကိုးမှ ကိုယ်မြင်ရတဲ့အတိုင်း ဓာတ်ပုံရပါတယ်။ ကိုယ်တွေအတွက်တော့ ဒီအချက်လေးက လွဲရင် P40 Pro ရဲ့ camera က လုံးဝ ဆရာကြီးတစ်ဆူ…
အခြားဖုန်းတွေလို 8K အထိ ရိုက်မရပေမဲ့ 4K/60fps video footage တွေက တကယ့် ရှယ်တွေပါ။ Stabilization က Main sensor ရော၊ Ultra-Wide မှာပါ ကောင်းလွန်းလှသလို အရင် P30 Pro ရဲ့ 4K ထက် တိုးတက်လာပါတယ်။ အချုပ်ကိုတော့ P40 Pro က Photography ရော၊ Videography မှာပါ လက်ရှိအကောင်းဆုံး Smartphone နေရာနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
2.Design and Built Quality
ကျွန်တော့်ဖုန်း 206 grams ကနေ P40 Pro (209 grams) ကို ပြောင်းသုံးကာစက P40 Pro က ပေါ့‌ေနပါလားလို့ ခံစားရလို့ Specs တွေ ဖတ်တော့မှ ကိုယ့်ဖုန်းထက်တောင် grams များနေသေးတယ်။ ဆိုတော့ Built Quality and Design ဆိုတာ အလေးချိန်နဲ့ Hand Feeling မှာ အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အရှေ့ဘက် မှန်တွေက လေးဘက်လုံးကို မသိမသာလေး ခုံးထားပါတယ်။ မသိမသာဆိုတာ OnePlus တို့ ခုံးသလိုမဟုတ်ပဲ အထစ်လေးနဲ့ ခုံးပေးတာမျိုးမလို့ ကိုင်ရတာ OnePlus တွေရဲ့ မှန်ခုံးထက်တောင် ပိုမိုက်တာပါ လေးဖက်လုံး ခုံးထားတာကြောင့်လဲ ပါမယ်ထင်မိ…
မှန်က ၄ ဖက်လုံးခုံးနေပေမဲ့ မျက်နှာပြင်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတော့ ဘေးနှစ်ဖက်ပဲ ခုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာ အပေါ်၊ အောက် အခုံးက သွသူခုံးထားတာမျိုး Display ပေါ်မှာ မမြင်ရ၊ အနှောက့်ယှက် မဖြစ်တာမျိုးပါ။
Design and Built Quality ကို ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးထည့်ထားတာက အနောက်ဘက်က ကင်မရာတွေ စီထားပုံကြောင့်လဲ ပါပါတယ်။ အကြီးဆုံးမိုဘိုင်း camera sensor ကို ဒီလောက်ထိလှအောင် ဆင်ပေးထားတဲ့ ကင်မရာ အနေအထားကို သဘောကျလို့မဆုံး…
(Camera အဖုကတော့ တော်တော်ထူတဲ့ အထဲပါပါတယ်။)
3.Battery Life and Charging Speed
4200mAh Battery ပဲ သုံးထားလို့ Battery မခံဘူးထင်ရင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ 90Hz နဲ့ တစ်ချိန်လုံးသုံးတာ (ML နဲ့ PUBG 1 နာရီစီ၊ ကျန်တာ Social Media, browsing, etc) screen on time ၉ နာရီဝန်းကျင်ဆိုတာ လုံးဝ Amazing Battery ပါ။ EMUI နဲ့ Kirin 990 ရဲ့ Battery Optimization ကြီးက ကြောက်ခမန်းလိလိ…
40W Max Super Charge နဲ့ အားပြန်သွင်းလို့ရမယ်0to 100% ကို 1:04 ပဲ ကြာပါတယ်။ 20% ကနေ 100% ဆိုရင် 45mins ဝန်းကျင်ပဲ အချိန်ပေးရတာမလို့ Battery အသုံးလဲ ခံသလို အားသွင်းတာလဲ ရှယ်မြန်ချက်…
40W max wired Charging အပြင် Fast wireless charging 27W နဲ့ Fast reverse wireless charging 27W အထိလဲ ရပါတယ်။
Kirin 990 5G Chip ရဲ့ Performance က လက်ရှိ SD 865 တို့နဲ့ Benchmarks အမှတ်တွေကွာပေမဲ့ အသုံးပြုမှူမှာ သိသာတဲ့ ကွာခြားမှူရယ်လို့တောင် မတွေ့ရ။ PUBG လား Snapdragon တွေလိုပဲ HDR, Ultra ထိရတယ်၊ ဆော့ရတာလဲ မကွာ၊ ပြီးတော့ Kirin Chips တွေက အပူကိုလဲ ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်နေတာဆိုတော့ Kirin 990 5G က ကျန်တဲ့ Flagship chips တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် စာရွက်‌ပေါ်အမှတ်နည်းပေမဲ့ လက်တွေ့ဘဝမှာ မသိသာပါဘူး။
(ကျွန်တော့်ဆီက 90Hz, SD 865 ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ယှဉ်ပြီးမှ ပြောတာပါ)
PUBG: HDR/Ultra and Smooth/Extreme
Display ကို စာပိုဒ်ရဲ့ အလယ် တစ်နည်း သဘောမကျတဲ့အထဲကို တစ်ဝက်ထည့်ထားပါတယ်။ Why?
1080p+ ထက် နည်းနည်းပိုများ 2K လဲ မပြည့်တဲ့ P40 Pro ရဲ့ Display နဲ့ 90Hz အတွဲအစပ်က တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်။ OnePlus 8Pro လိုမျိုး 2K, 120Hz Display မျိုးကို သူံးဖူးတဲ့သူ၊ Display crazy ခွဲတတ်တဲ့သူတွေကလွဲရင် P40 Pro ရဲ့ Display က အကောင်းဆုံးထဲက တစ်ခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ EMUI ရဲ့ 90Hz က O2 UI လို Animation speed မြန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ smooth ဖြစ်တဲ့ဘက်ကို သွားလို့ Personal အရ ပိုတောင် prefer ဖြစ်မိ…
ဆိုတော့ Display မှာ မကြိုက်တဲ့ အချက်ကတော့ ရှေ့ဘက်က နလုံးပြူး အပေါက်ကြီးပါ။ 32MP Selfie camera နဲ့ face unlock အတွက် 3D Depth sensor နှစ်ခုကို နေရာပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ၄ ဖက်လုံး ခုံးပြီး လှလွန်းတဲ့ Display ကြီးက လှသင့်သလောက် မလှတော့ပါဘူး။ အချိန်တိုင်းလိုလို မှန်တဲ့၊ မြန်တဲ့ Under-Display Fingerprint ပါနေပြီးသားကို Face unlock နဲ့ Portrait selfie တွေအတွက် Depth Sensor ကို နေရာထပ်ပေးထားတာ Personally သဘောမကျမိတာမျိုးပါ…
သိကြတဲ့အတိုင်း Google services တွေ တစ်ခုမှ out of the box အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ Google app တွေတင်မဟုတ်ပဲ Third-Party apps တွေမှာတောင် Google Drive သုံးမရတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် Google services တွေ တမင်မထည့်ပဲ Out of the box သုံးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ (ကိုယ်တိုင် (ဝါ) ဆိုင်တွေမှာ ပြန်ထည့်လို့ ရပါတယ်။ account နှစ်ခုပြိုင်သုံးမရတာကလွဲရင် ကျန်တာ အကုန် Ok တယ်လို့ သိရပါတယ်။)
ဆိုတော့ Google services တွေ မပါတဲ့ EMUI အကြောင်းပဲ ပြောပါမယ်။ ကိုယ်တွေလို စာရေးတဲ့သူတွေအတွက် တိုင်အပတ်ဆုံးဖြစ်သွားတာက Google Keep သုံးမရတာရယ်၊ Grab, Foodpanda တို့ သုံးမရတာမျိုးတွေ ကြုံခဲ့ရတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို EMUI က Battery Optimization ကောင်းလွန်းသလို RAM Management လဲ အရမ်းမိုက်လွန်းပါတယ်။ ကိုယ်တွေတော့ RAM Management မှာ EMUI ကို သဘောအကျဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့…
စာပိုဒ်ရဲ့ အလယ်တစ်နည်း မကြိုက်တဲ့နေရာကို ရောက်လာပါပြီ… Reviewers ‌တော်တော်များများရဲ့ မကြိုက်ဆုံး အချက်ထဲမှာ ပါနေသလိုပဲ P40 Pro က Audio Quality မှာတော့ တော်တော်လေး ညံ့ပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာပဲ ပါတဲ့ Mono Speaker က အသံကျယ် (loudness) ပိုင်းမှာ သာမန်လောက်ပဲရတယ်၊ Clarity လေး ကောင်းပေမဲ့ High နဲ့ Low တွေမှာ နည်းနည်းလေး အားနည်းတယ်လို့ ထင်တယ်။ Huawei ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း Stereo Speakers ထည့်ဖို့ကို အရင်တည်းက ခေါင်းမာခဲ့တာဆိုတော့ …
ဖုန်းပြောဖို့အတွက်ကတော့ အပေါ်ဘက် Display မှန်သားအောက်ကနေ အသံထွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းပြောဖို့အတွက်တော့ လုံလောက်တဲ့ အသံကျယ်ပါတယ်။
အော်… တချို့ ဖုန်းတွေမှာ မပါတော့တဲ့ နားကြပ် (Type C) လေးကိုတော့ ဘူးထဲမှာ ထည့်ပေးထားတာ မိုက်တယ် Quality လေး မဆိုးလှ…
Bluetooth 5.1, Wifi 6, 5G network တွေ အပြင် အပေါ်ဘက် frame မှာ အသုံးတည့်တဲ့ IR sensor လဲ ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။ နောက်ထပ် Flagship feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ IP 68 rating လဲ ပါပါသေးတယ်။ Come on…
အတော်လဲ ရှည်လှပြီဆိုတော့ အဆုံးသတ်ကြပါစို…။
လောလောဆယ် 15 သိန်းလောက်သုံးမယ် ကင်မရာ အကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်ရမဲ့ အပြင် 90Hz လို Display, ၂ ရက်နီးနီးရတဲ့ Battery Life နဲ့ သေသပ်လှတဲ့ Design မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ P40 Pro မှ တစ်ပါး အခြားမရှိလို့ ဆိုရမလိုပါပဲ။ (Google Services တွေက လက်ရှိမှာ ပြန်ထည့်ပြီး ချောချောမွေ့မွေ့ သုံးရနေပါသေးတယ်။ May be တစ်ချိန်ချိန် ဥပမာ Android 11 မှာ သုံးမရတော့ဘူးဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်တာမျိုးကိုတော့ risk ယူရပါလိမ့်မယ်။) Chrome တောင် အလုပ်မလုပ်တော့ သုံးနေကျ Browsing bookmarks, History တွေ မရှိပဲ သုံးရတာ တိုင်ပတ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ အပေါ်က စကားပြန်ကောက််ရရင် Google Services တွေအတွက် Risk ယူနိုင်ရင် လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဖုန်းကင်မရာအပြင် အခြားနေရာတွေမှာလဲ Audio ပိုင်းကလွဲလို့ အကုန်နီးပါး တန်းဝင်တဲ့ P40 Pro က သင့်အတွက် ရွေးချယ်စရာ Premium Flagship တစ်လုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောရင်း…
Huawei P40 Pro Full Review by Tech Corner
HuaweiP40 ProP40 SeriesReviews
Share via:0Shares0မနေ့ကတင်ပဲ realme Myanmar က realme Watch, realme Buds Air Neo
Why do we buy expensive iPhone? (33,177)
iPhone X vs iPhone 11 Pro Should You Upgrade (25,781)